Mbola napetraka kosa ny fahamehana ara-pahasalamana. Na dia mbola an-jatony isan` andro ny olona maty ary efa mananikana 100 000 isa no voan` ny tsimokaretina coronavirus dia tsy maintsy niroso tamin` ny fialàana amin` ny fihibohana noho ny olana ara-toekarena. Nisedra ny mafy ny toekarena tao aminy satria 40%n` ireo frantsay no nizaka izany ankehitriny. 12 tapitrisa ireo very asa voakasiky ny fihibohana. Ho fitsinjovana ny toekarena tokoa no mahatonga ireo firenena vitsivitsy tsy miditra amin`ny fihibohana toa an`i Bresil. Efa maherin` ny arivo no maty ary maherin`ny 20 000 isa no mitondra ny tsimokaretina saingy miziriziry ny filoha Brezilianina. Na ho ela na haingana anefa dia tsy maintsy miala amin` ny fihibohana noho ny firenena rehetra satria tsy afaka hiaina amin` izany ela ny mponina.